Mogadishu Journal » 2016 » November » 13
AMISOM oo baareysay dilka dad rayid ah oo ka dhacay gobolka Galguduud
Mjournal :-Ciidamada AMISOM ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku aadan wararka sheegaya in ciidamadooda ay bartamaha Soomaaliya ku dileen ugu yaraan 7-qof oo rayid ah kadib markii ay ku dagaalamen ciidamadooda iyo kuwa Al-shabab arbacadii tagtay. AMISOM ayaa sheegtay in...
Abwaan Cabdi Shire Jaamac Jooqle oo ku guuleystay kursiga aqalka hoose Soomaaliya
Mjournal :-Waxaa maanta magaalada Cadaado ka dhacday doorashada xubnaha aqalka hoose oo ay kusoo baxeen xildhibaanada ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada magaalada Cadaado oo xiiso gaar ah xambaarsaneyd ayaa waxaa lagu doortay xildhibaanada aqalka...
Mjournal :- Hogaamiyaha midigta fog ee dalka Faransiiska ayaa BBC-da u sheegtay in guusha Trump ka gaadhay doorashada Maraykanku dardar gelineyso fursada iyadana loogu dooran karo in ay noqoto madaxweyne sannadka dambe. Marine Le Pen, oo ah hogaamiyaha xisbiga French National...
Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo digniin u dirray Donald Trump
Mjournal :–Xog-hayaha guud ee gaashaan buurta NATO, Jens Stoltenberg, ayaa u digay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka, Donald Trump, waxaanu u sheegay in “kelinimo” aanay dan u ahayn Europ iyo Maraykanka toona. Wuxuu sheegay in reer galbeedka ay soo food...
Donald Trump has said he will not accept a salary for being president when he is in the White House. Prior to his election victory, Mr Trump has insisted he will not “take even one dollar” of the $400,000 presidential salary. Speaking at an event in September last year, he told a...
Somali President Hassan Sheik Mohamud has appealed to the international community to provide humanitarian assistance to people affected by severe drought which is ravaging the Horn of Africa nation. President Mohamud said several parts of Somalia have been affected by drought...
Sida ay maanta qortay jariirada Sunday Times, Ronaldo ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee kubada cagta ee shaqeysta 100 milyan euro kaliya hal sanno gudaheed. Lacagtaas tirada badan ayuu Ronaldo ka helayaa qandaraasyadii cusbaa ee uu u saxiixay Real Madrid iyo shirkada...
Shaxda Isku Darka Ee Xulalka England & Spain Oo La Soo Saaray Ka Hor Kulankooda Wembley Stadium.
England ayaa soo dhaweyneysa Spain kulankoodii ugu horeeyay ee adag tan iyo markii shaqada si ku meel gaar ah loogu dhiibay Gareth Southgate, iyadoo habeenka Talaadada kulan saaxiibtinimo kula ciyaaraya garoonka Wembley. Inkastoo La Roja ay ka fogtahay awoodii ay aheyd 10kii...
Gudddiga loo saaray xal u hellida collaada magaalada Gaalkacyo
Mjournal :-Kulanka u dhaxeeya maamulada Galmudug iyo Puntland ee wali ka socda ayaaa goor dhow waxaa lagu magacaabay Guddi ka kooban 18 xubnood, kuwaasoo ka shaqeynata dhameynta xiisada iyo dhaqan gelinta xabad joojintii ay gaareen Madaxda Puntland iyo Galmudug. Shirka ka socda...
Hillary Clinton oo ka hadashay cidda ka mas’uulka aheyd guuldaradeeda
Mjournal :-Hellery Cillinton oo ah Haweeynada Xisbiga Dimoqaraadiga Mareykanka ugu sharxaneyd Madaxtinimada Mareykanka ayaa masuliyadda guul daradeeda dusha ka saartay Agaasimaha FBI-da Mareykanka Jeames komi. Waxay sheegtay in Go’aankii Madaxa FBI-da Maraeykanka uu ka soo saaray...
Guddiga doorashada dadban oo war ka soo saaray cabashada ka jirta doorashada aqalka hoose
Mjournal :-Guddigu wuxuu si aad ah u soo dhaweynayaa boogadinayaana doorashooyinka Baarlamaanka Aqalka Hoose ee JFS ee ka bilowday Dowlad Gobaleedyada dalka taa oo horumar fiican laga gaaray inta badan. sidoo kale waxa uu bogaadinayaa Doorshada Xubnaha Aqalka sare ee Dowlad...
AMISOM oo dalbatay ciidamo dheeraad ah oo lagu biiriyo howlgalka midowga Africa
Mjournal :-Howl galka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dalbaday ciidamo dheeraad ah oo la keeno Soomaaliya, inta lagu guda jiro doorashooyinka dalka ka dhacaya. Kulan Taliyeyaasha dalalka ka qeyb qaadanaya howl galka AMISOM ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa waxay ku dalbadeen...
RW Sharma’arke” waa dib looga fiirsado nidaamka federaalka, haddiiba uu colaad dhalinayo
Mjournal :-RW Sharma’arke Cumar C/rashiid ayaa shaki geliyay nidaamka federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in ay tahay in dib loo eego. Ra’iisal wasaaraha xilka sii haya ee xukuumadda Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa si kulul uga hadlay xaaladda Gaalkacyo,...